HORDHAC: FC Porto vs Liverpool – Gool FM
HORDHAC: FC Porto vs Liverpool
(Europe) 14 Feb 2018. Liverpool ayaa u safartay dalka Portugal si ay ula soo ciyaarto Porto lugta hore ee wareega 16 ka Champions League.
Liverpool waxaa ganaax uga maqnaan doona Can halka uu dhaawac waqti dheer ku maqan yahay Nathaniel Clyne,.
Joe Gomez oo qaba dhibaato Jilibka ah ayaa shaki laga muujinayaa halka uu Ragnar Klavan taam u yahay kulanka kaddib dhaawac mowdada ah.
Daafaca lacagaha Rikoodhka ah ugu yimid Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa lagu wadaa inuu kulankiisii ugu horreeyay ka soo muuqdo Champions League, Goolhaye Loris Karius ayaa isna lagu wadaa inuu booskiisa xafito.
Weerarka cududa leh ee Porto ayaa Caawa waayi kara hubkiisii ugu waynaa maadaama shaki laga muujinayo taam ahaanshaha dhaliyaha reer Cameroon ee Vincent Aboubakar oo qaba dhaawac muruqa ah.
Xiddigaha kale ee dhaawacyada laga daweynayo Porto ayaa waxaa ka mid ah Marcano, Danilo iyo Andre Andre.
Kulanka: FC Porto vs Liverpool (Lugta hore ee wareega 16 ka Champions League)
Goobta: Estadio do Dragao
Goorta: 10:45 Habeenimo
Garsoorka: Daniele Orsato (Italy)
◾Liverpool wax guul darro ah kalama kulmin Porto, afar kulan ayay la ciyaartay dhammaan tartamada (2-guul iyo 2-bar baro), Bar baro ayay ku wada dhammaadeen labadii kulan ay ku wada ciyaareen Portugal.
◾Kulanka kaliya ay isaga hor yimaadeen Bug baxa tartamada Yurub wuxuu ahaa quarter-finals UEFA Cup 2000-01, Liverpool ayaa isku cel celis 2-0 ku adkaatay iyadoona qaaday koobkaas.
◾Porto ayaa guul darreysatay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay Champions League kulamada bug baxa.
◾Porto ayaa soo gaartay kulamada bug baxa Champions Leagu emarkii ugu horreysay labo xilli ciyaareed oo xiriir ah tan iyo 2009/10. Ma aysan u soo gudbin quarter-finals tan iyo sidii ay koobka u qaadeen 2004.
◾Liverpool ayaa ka mid ah afar kooxood oo aan laga adkaan Champions League ilaa iminka kal ciyaareedkan, Waxaa ku wehliya Barcelona, Besiktas iyo Tottenham.
◾Porto ayaa dhalisay sideed gool oo kubbadaha set-piece ee ka yimaad Koornooyinka iyo laadadka xorta ah waana kooxda ugu badan Champions League kal ciyaareedkan.
◾Kaliya gegada PSG Parc des Princes stadium (16-gool) ayaa ka badan goolasha ay Porto ku dhalisay garoonkeeda Dragao (15-gool) Wareega Group yada Champions League ee kal ciyaareedkan.
◾Weeraryahanka FC Porto Vincent Aboubakar ayaa dhaliyay shan gool isla markaana caawiyay 2-gool Champions League kal ciyaareedkan waana waqtigiisii ugu fiicnaa.
Safafka Macquulka ah ee FC Porto vs Liverpool:
HORDHAC: Real Madrid vs PSG....(Kulankii la wada sugayay)
"Waa in si dhab ah noola qaataa innaga iyo Manchester City.".- Neymar oo Booteeyay